Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga enepuli eBrotas SP - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga enepuli eBrotas SP
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguOsvaldo Junior
UOsvaldo Junior ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uOsvaldo Junior iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Xa uqhagamshelana/ubhukisha, kunyanzelekile ukuba uchaze inani leendwendwe. Le ndlu isemaphandleni ilala abantu abadala abayi-5 ngokukhululekileyo ! Ingcaciso Yendlu: * Amagumbi okulala ayi-2 * Amagumbi okuhlambela ayi-2 (ayi-1 angaphandle ) * Ikhitshi eliyi-1 elinokutya * Igumbi lokuhlala eline-Smart TV * i-Wi-Fi * Indawo yokubraya * Indawo yokupaka engabonakaliyo. Ime kwimizuzu emalunga ne-3 ukusuka kwidolophu.
Le ndawo ibethwa ngumoya, inemihombiso yakudala kunye nokukhanya okwaneleyo. Yonke indawo enezityalo , indawo yokoja entle eneenkcukacha ezininzi nejongene nendlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga, nekufuphi ne-pergola enomtsalane.
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga inegumbi lokuhlala elivulekileyo nelitofotofo, ikhitshi elinento yonke, igumbi lokuhlambela elingaphakathi elinomtsalane elinamagumbi okulala ayi-2, eliyi-1 elijonge ipuli nelinye elinendawo yokungena kwibhalkoni .
Igaraji yabucala yeemoto eziyi-2 kunye negeyithi ye-elektroniki.
Sishiya amaqhebengwana okukhenketha neevenkile zokutyela kule ndawo , ibe xa ndifika ndithumela abantu endinokufikela nabo ngowhatsapp .
Le ngingqi yindawo ethe cwaka, ekhuselekileyo nevuyisayo, ekufutshane kakhulu nepaki yeSaltos, ingxangxasi evulekele uluntu, ekwimizuzu eyi-4 ukuya embindini, apho ineebhari eziliqela, iivenkile zokutyela kunye neenkampani zabakhenkethi.
Inedolophu yaseTorrinha esecaleni kweBrotas, enemizuzu eyi-20 kuphela ngemoto, idolophu encinci eqhelekileyo ngaphakathi . Umnyango olandelayo yiPatrimônio, apho uninzi lweengxangxasi ezintle zikhoyo kunye nendawo ethe cwaka yokuqubha, ukuhamba ngesikhephe okanye ukuhamba ngephenyane, kwimizuzu eyi-30 ukusuka kwidolophu.
Umbuki zindwendwe ngu- Osvaldo Junior
Undwendwe luza kuba nemfihlo ngokupheleleyo kule ndlu isemaphandleni , kwaye sinokuthembela ngoncedo lwethu, ukukhenketha kunye neendawo, sisoloko sikhona ukuze sikuncede ngayo nantoni na! Sisoloko sishiya iiphetshana eziliqela zeendawo kunye nokukhenketha ukuze sikhokelwe bhetele.
Undwendwe luza kuba nemfihlo ngokupheleleyo kule ndlu isemaphandleni , kwaye sinokuthembela ngoncedo lwethu, ukukhenketha kunye neendawo, sisoloko sikhona ukuze sikuncede ngayo nan…